Bhaibheri Rakarekodhwa: Rinowanikwa paJW.ORG
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chol Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fante Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Thai Tigrinya Turkish Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Valencian Vezo Welsh Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Bhaibheri Risingatengeswi Rakarekodhwa Richiverengwa Nevanhu Vakasiyana-siyana
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Bhaibheri Risingatengeswi Rakarekodhwa Richiverengwa Nevanhu Vakasiyana-siyana
“Unonzwa kuda kuramba uchiriteerera, rinoita kuti udzamise pfungwa uye rinonyatsobudisa simba rine Shoko raMwari.”
“Unoita seuri kutoona zviri muBhaibheri zvichitoitika.”
“Kana wangotanga kuriteerera hauzodi kumira! Rinoita kuti nditange kuona Bhaibheri sebhuku randisati ndamboverenga muupenyu hwangu.”
Izvozvo ndizvo zviri kutaurwa nevakawanda vakateerera mashoko akarekodhwa ebhuku raMateu riri muBhaibheri, anowanika muChirungu pajw.org.
Zvapupu zvaJehovha zvakatanga kubudisa Bhaibheri rakarekodhwa muna 1978. Nekufamba kwenguva, rakazorekodhwa mune mimwewo mitauro 20.
Kubudiswa kwakaitwa Shanduro yeNyika Itsva yakadzokororwa ya2013 kwaireva kuti Bhaibheri raifanira kuzorekodhwa zvakare. Sezvo Bhaibheri riine mashoko akataurwa nevanhu vanopfuura 1 000, iye zvino Bhaibheri riri kurekodhwa pachishandiswa manzwi evanhu vakawanda kana tichienzanisa nerataiva naro kare raingova nemanzwi evanhu vatatu chete.
Kuva nevanhu vakawanda vanoverenga Bhaibheri kunobatsira vateereri kuti vaite sevari kuona zvinhu zvacho zvichitoitika. Bhaibheri iri rakati siyanei nenyaya dzinowanzobuda dzinenge dzakanzi, Kuverengwa Kwenyaya dzemuBhaibheri Sedziri Kuitika idzo dzinenge dzakawedzerwa tumimhanzi nezvimwewo. Kunyange zvakadaro, maverengerwo ari kuitwa Bhaibheri iri anobatsira kuti uite seuri kuona zvinhu zvacho zvichitoitika.
Kuita izvi hakusi nyore. Zvinotoda kunyatsoronga. Chekutanga ndechekuziva kuti ndiani ari kutaura pavhesi imwe neimwe, airevei, uye aiva nemanzwiro akaita sei. Semuenzaniso, kana paine muapostora akataura asi nyaya yacho isingaratidzi kuti aiva ani, panofanira kushandiswa inzwi raani? Kana munhu wacho ari kutaura achiratidza kusava nechokwadi, panoshandiswa inzwi raTomasi, asi kana achiratidza kuti anomhanyirira kutaura zvaanofunga, panoshandiswa raPetro.
Chimwewo chinofungwa izera remunhu wacho anenge achitaura. Panotaurwa nemuapostora Johani achiri muduku, panoshandiswa inzwi remunhu achiri muduku; paanozotaura akura, panoshandiswawo remunhu akura.
Asi hazvigumiri ipapo, panofanirawo kuzotsvakwa vanhu vanonyatsogona kuverenga. Vakawanda vacho vanotorwa pavashandi vepahofisi yebazi reZvapupu zvaJehovha remuUnited States. Panoitwa urongwa hwekuti vaya vangazoshandiswa pakuverenga vambotanga vapiwa ndima dzekuverenga dzinenge dzichibva muMukai! vokumbirwa kuti vanodzigadzirira vozodziverenga vachirekodhwa. Vanoverengawo mavhesi ari muBhaibheri emunhu anenge achiratidza hasha, kusuwa, kufara kana kuti kuora mwoyo. Izvi zvinobatsira kuti paonekwe kuti vanonyatsogona here kuverenga uye kuti ndepapi pavangazoshandiswa.
Kana zvadaro vanenge vasarudzwa vanozopiwa zvikamu zvavachaverenga vozoenda kune imwe yemastudio ari kuBrooklyn, kuPatterson, kana kuti kuWallkill, kwavanozorekodhwa. Munhu anenge achitungamirira pabasa racho ndiye anoona kuti muverengi averenga achinyatsobudisa mashoko acho nenzwi riri kudiwa here. Ari kutungamirira wacho neari kuverenga vanoshandisa mapepa anenge achiratidza kuti muverengi anofanira kusimbisa mashoko api, uye kuzomira papi muvhesi imwe neimwe. Chimwe chinogona kubatsira anenge achitungamirira kuteerera Bhaibheri rakarekodhwa reShanduro yeNyika Itsva ratakanga tiinaro kare.
Zvimwe zvinhu zvinogadziriswa mustudio pazvinenge zvangopedza kurekodhwa. Kuti zviri kunyatsodiwa zvibude, dzimwe nguva vanorekodha vacho vanoita kuti ari kuverenga adzokorore chimwe chikamu kakati wandei, vozotora panenge paverengwa zvakanaka vopajoinidza nezvimwe zvavanga vatorekodha kare.
Hatisati tava kuziva kuti Bhaibheri rose reShanduro yeNyika Itsva yakadzokororwa ya2013 richapera kurekodhwa rini. Asi bhuku rimwe nerimwe parinenge rangopedza kurekodhwa richabva raiswa pajw.org, pachikamu chakanzi “Mabhuku eBhaibheri,” uye padivi pebhuku racho pachaiswa chiratidzo chinoita kuti uzive kuti rakarekodhwa.
Takabudisirei Bhaibheri reShanduro yeNyika Itsva?
Ungaita Sei Kuti Unyatsobatsirwa Paunenge Uchiverenga Bhaibheri?
Pasinei nekuti uri kuverenga chikamu chipi cheBhaibheri, kutsvaga mhinduro dzemibvunzo 4 kunogona kuita kuti unyatsobatsirwa nezvauri kuverenga.
Purogiramu Yokuverenga Bhaibheri